Somaliland: Warbixin sanadeedka Xarunta Xuquuqal Insaanka ee 2019 - WardheerNews
Somaliland: Warbixin sanadeedka Xarunta Xuquuqal Insaanka ee 2019
Maanta oo bishu tahay 31 December 2019, Xarunta Xuquuqal Insaanku waxay soo saartay warbixin sanadeedkeedii xuquuqal insaanka ee sanadka 2019.
– Waxaanu soo jeedinaynaa in booliska isbadal aad u balaadhan lagu sameeyo, iyadoo dastuurka dalka la waafajimayo. Sidoo kale in booliska mid madai ah (oo aan military ahayn) laga dhigo, oo ay hoostagaan maxkamadaha shacabka ee caadiga ah.
– In la abuuro gudi madax banaan oo indhaha ku haysa khaladaadka iyo gafefka sharci ee boolisku geystaan.
– In boolisku joojiyo awooda xad dhaaf ka ah ee uu u had iyo goor u is ticmaalo , mudaharaadayaasha ama dadka raba inay isusoo baxyo sameeyaan.
– Sidoo kale in lamagacaabo gudi madax banana oo baadha, siyaabaha iyo sifaha ay boolisku dadka ku xidhaan.
– In lamagacabo guddi madax banaan oo badhitaan ku samaysa xadgudubyada booliska laga tirsanayo ee kadhacay Ceel –Afwayn, gaar ahaan dilka aan garsoorku jidayn ee ciidamada RRU du ka gaysteen Magaalada Ceel Afwayn, si maxkamed la horkeeno cidii dilka gaystay oo sharciga loomariyo.
– In dowladu ixtiraam weyn u muujiso cabirka rayiga xorta ah, oo aay joojiso xadhiga iyo cago juglaynta ay ku hayso dadka iyada dhaliila.
– In siyaasiyiinta loo ogalaado xuquuqqaha siyaasiga ah ee sharcigu siiyay.
– In dadka loo ogalaado mudaharaadyada sida uu dastuurkuba waajibinayo.
– In dowladu wax ka qabato xarumaha aan sharciga ahayn ee loo furtay dawo dhaqameedyada ee dadka lagu waxyeeleeyo.
– Ugu danbayn waxaan ku baaqaynaa in dowladu joojiso dadka ay sifaha xooga ah een sharciga ahayn dhulkooda uga rarayso ama ugu saarayso.